Nuraphone muyedzo: mahedhifoni eBluetooth evatambi akanaka kwazvo - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo.
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Dec 10, 2020 | Hardware miedzo, nhau, Vhidhiyo mitambo
Chikamu 80%Chikamu 80%
Kubva pamapulagi kudzokera kumusoro, mahedhifoni akawana chimwe chinhu chekuvandudzwa, hongu mune yemazuva ano, isina waya guise - Bluetooth inoita kuti izvi zvigoneke. Iyo smartphone nokudaro inova multimedia control centre inopa zvirimo. Mahedhifoni epamusoro-soro, mazuva ano anochinjika mamodheru anogona kushandiswa pakuenda kana kumba - kungave pamberi peTV kana panzvimbo yemitambo - anofanirwa kuve neruzha rwakanaka. Iwo mahedhifoni eBluetooth kubva kumugadziri Nura haadi kushandura chinhu chiri pasi pemusika.
Kuti mimhanzi nekutaura zvisvike munzeve mune yakanaka mhando kana uchinakidzwa nefoni mafirimu, mitambo yemitambo uye mimhanzi, unoda kanenge maheadphones akasimba. Kana kuti iwe unogona kuvimba neimwe yemhando dzakawanda dzemhando yepamusoro dzinoshambadzirwa nevagadziri vakasiyana. Imwe purojekiti inomira zvakanyanya: Nuraphone. Inopihwa mari nekuwanda mari, mahedhifoni eBluetooth asina waya akatanga akanangana nemimhanzi nevadi vefirimu. Zvichakadaro, maikorofoni yakagadziridzwa yemitambo yakaunzwa pamusika, izvo zvinoita kuti musanganiswa weNuraphone mahedhifoni uye Nuraphone Gaming Microphone ive imwe nzira yevatambi.
Iyo Nura: Mahedhifoni ndeimwe yeaya madiki ekuunganidza vanhu nyaya dzebudiriro. Muna 2016, vagadziri vakakwidza mari inodarika miriyoni 1,8 yemadhora ekuAmerica kuburikidza neKickstarter kuitira kuti vaone chiono chavo chemahedhifoni matsva. Vision nekuti iyo nuraphone haina kujairika pane yakajairwa mahedhifoni pamatanho akati wandei. Panzvimbo pekuita mutsauko pakati-munzeve, pa-nzeve kana pamusoro-nzeve, Nura anovimba neyakasanganiswa-munzeve uye pamusoro-nzeve pfungwa, i.e. inopa nzeve dzakavhara mabhomba umo mukati-nzeve plugs dzakaiswa. Pfungwa yevagadziri: Mahedhifoni anofanirwa kupa yakanakisa inonzwika ruzivo uye otomatiki inochinjika kune yega kunzwa kweanopfeka.
Pfungwa iri shure kwayo yakabva kuna chiremba wekuAustralia nzeve, mhino nehuro uyo airatidza kuti akanga ane ruzha rwakaipa rwakakwana. Kubva panzeve yekunze kusvika kuhuropi, mahedhifoni anobva kunaNura anoshandisa tekinoroji yeruzha kuyera kuti magadzirirwo ezvichemo anofanira kuitwa sei kuitira kuti anopfeka mahedhifoni abatsirwe kubva pamufananidzo wega wega.
Nuraphone inosanganisa mukati-nzeve uye pamusoro-nzeve - uye izvo neANC
Sezvinobvumwa, kudyara kweanosvika mazana mana emaeuro kunogona kutadzisa kune vangangotenga. Nekudaro, kana iwe ukavhura kurongedzerwa kweNuraphone, iwe unokurumidza kuona kuti magadzirirwo ega anoruramisa chikamu chemutengo wepamusoro wekutenga. Metal pachinzvimbo chepurasitiki, uremu pachinzvimbo che "lightweight", yakapfava rubber membrane panzvimbo ye scratchy fabric surface.
Iwo mahedhifoni anogara zvakachengeteka mumusoro mako, asi iwe unogona kunzwa izvozvo futi. Iyi isina waya yemhando yepamusoro kubva kunaNura haisi kuremerwa. Iwe unofanirwa kubvumira mahedhifoni maawa mashomanana kuti ujairane, nokuti iyo yepamusoro-tech yaunotakura iwe inogona kumiririrwa munhamba: iyo Nuraphone inorema kumativi 330 magiramu, ine nyoro kesi inenge magiramu 400. Uye iwe vanoda zvekupedzisira Zvakaoma kuita pasina kana iri nyaya yekutakura akapiwa mutengo. Mukushandiswa kwakamira kumba, iyi "dambudziko rehuremu" harisisiri dambudziko, nekuti mahedhifoni emazuva ano emitambo haareme zvakanyanya.
Inogona kutoonekwa kubva kunze: Iko kusanganiswa kwezvinhu zvealuminium uye silicone. Kuseri kweiyo Nura logo kune mabhatani ekunzwa, anogona kupihwa mabasa kuburikidza neapp. Mufananidzo: André Volkmann
Kufanana nehuremu, iwe unogona kunzwa mabhenefiti eNuraphone nekukurumidza. Iwo mahedhifoni akagadzirwa akasimba, akasimba uye panguva imwechete chiziviso cherudo kune yakapusa dhizaini yepakutanga. Kupenya kwemavara, kubudirira kana hodgepodge yemabhatani hazviwanikwe pamahedhifoni aya. Yakanaka uye yakapusa, iyi ndiyo nzira yaungatsanangura nayo modhi zvipfupi asi nemazvo. Chero zvazvingaitika, haugone kuudza nekutarisa iyo Nuraphone kuti hunyanzvi hwayo, pamwe shanduko? Kunyanya, kutarisa muhedhifoni shell kunopa pfungwa yekuti kune chimwe chinhu chakakosha kuvanzwa kuseri kweBluetooth musoro: chikamu chemukati-nzeve chakaiswa muchikamu chepamusoro-nzeve. Pane chikonzero.
size: X X 190 170 88 mamirimita
Kubatana: Bluetooth aptX HD, Universal Wired (Mheni, USB-C, micro-USB, analogi)
Battery rongedza: Lithium Ion Battery, kusvika kumaawa makumi maviri
Noise kudzvinyirira: Active Noise Cancellation (ANC) + dual passive yoga
Material: Stainless aluminium shells, hypoallergenic silicone
Mutauro: Maikorofoni ekunze ekufona
Kana iwo akavakirwa-mukati mapulagi akasimba munzeve, iyo Nuraphone inoyera kunzwa kwemushandisi neiyo yakabatana app. Kuti uigadzirise, unofanirwa kutora maminetsi mashomanana, enda kunzvimbo yakanyarara uye uteedzere mirairo yezwi rekombuta. Nenzira, imwe nzira yekushanda yeNuraphone, zvisinei kubva muchikamu chemashoko: inzwi - mutauro unogona kuiswa - inopa ruzivo pamusoro pezinga rebhatiri rekubhadhara kana mahedhifoni akashandurwa.
Munguva yekuenzanisa, toni dzakasiyana-siyana dzinoridzwa dzinoburitsa kuita kwekunzwa, kunonzi otoacoustic emissions. Kubva pane izvi, iyo app inoverengera "yakakwana inonzwika mufananidzo" kune avo vane nuraphone munzeve dzavo. Chaizvoizvo, izvi zvinoenderana nemaitiro anozivikanwa kubva kuequalizer marongero. Panyaya yemahedhifoni aNura, zvisinei, haufanirwe kukweretesa ruoko, asi unoperekedzwa neotomatiki maitiro. Izvi zvinotora anenge maminetsi maviri kusvika matatu, haugone kukanganisa: Kana mahedhifoni akasagara zvakanaka munzeve dzako, unozoziviswa uye unofanirwa kugadzirisa.
Zviri nyore kushandisa: iyo smartphone app inokutungamira iwe kuburikidza neiyo calibration maitiro mumatanho mashoma. Mufananidzo: André Volkmann
Kana iyo configuration yaitwa, hapana chinomira munzira yekuteerera mafaro. Uye "kunakidzwa kwekuteerera" kunogona kunzwisiswa sezvazviri, nekuti izvo zvinogadzirwa neNuraphone semanzwi zvinogutsa. Makwiriro akajeka, manzwi anonzwisisika, mabhesi haadhume kana kudzvova, asi anotakura ruzha. Izvi zvinotsigirwa nekudengenyeka kuduku kwe rubber coating. Panguva ino, Nura anobvumira mushandisi kuita chimwe chinhu chisingagoneke neNuraphone mahedhifoni: kugadziridza inzwi.
Kusimba kwemabass kunogona kugadziridzwa uchishandisa inotsvedza muapp. Pakazere, ruzha rwakanaka uye rwuri padanho rinoenderana nemutengo wekutenga wemahedhifoni eBluetooth. Chero ani zvake anofarira kuteerera mimhanzi ye-bass-inorema kana zvinyorwa zvine mataurirwo ematoni akaderera kazhinji anofanira kujaira. Nzeve inokwanisa kuparadzanisa ma-frequencies akaderera pamwe chete nepamusoro uye pakati toni. Izvi zvinokonzeresa nenyaya yekuti mahedhifoni eNuraphone anounza toni kubva munzvimbo mbiri dzakasiyana kusvika panzeve nekuda kwekubatanidzwa kwe-munzeve uye pamusoro-nzeve: bass inogadzirwa mu-over-ear shell, zvimwe zvese zvinobva zvinovhara nzeve . Uye ndizvo chaizvo izvi zvinoshanduka kuva chinhu chinogadzirisa padanho reruzivo.
Kune rimwe divi, musanganiswa wemukati-uye pamusoro-nzeve zvinoreva kuti mahedhifoni e nuraphone anoburitsa kuita kwakajeka maererano nekunzwika, kune rimwe divi, misiyano yeanatomical inogona kureva kuti vamwe vashandisi vanowana mahedhifoni akanyanya kugadzikana, nepo vamwe vachinetsekana neiyo. comfort factor. Nzeve dzinofanira kugara dzakasimba munzeve, dzimwe nguva unogona kunzwa izvi paunofamba. Sekutonga kwechigunwe, zvishoma kana zvakanyanya kudzikama iwe unofamba, zvakanyanya kugadzikana aya mahedhifoni. Takanga tisina matambudziko nekufamba kuri nyore uye nzendo nezvifambiso zvevoruzhinji. Kumhanya kana kuchovha bhasikoro, kune rumwe rutivi, zviitwa zvinongofanira kutariswa zvishoma.
Kana iyo otomatiki kuyerwa kwekunzwa kwaitwa, vashandisi vanogona kudzokera pane yavo yega ruzha chimiro. Muchokwadi, iyo bvunzo yakaratidza akasiyana profiles. Mufananidzo: André Volkmann
Iwo mahedhifoni anogadzirisa kurasikirwa kwekunyaradza maererano nezwi. Manuraphones anounza ruzha munzeve nenzira yakadzikama uye yakavanzika, kuderedzwa kudiki muB-noti kunofanirwa kuitirwa mumhanzi wekirasi - asi mamwe mahedhifoni anodhura anofanirwawo kunetsekana neizvi. Kana zvisina kudaro, zviridzwa zvinogona kunyatsosiyaniswa. Kana iwe uchida kuona mutsauko, haufanirwe kushandisa iyo Nuraphone-yemukati kuenzanisa kuburikidza neapp, asi edzai rwiyo rwedombo rwakatsetseka neNuraphone uye mahedhifoni akajairwa imwe mushure meimwe. Iwo mahedhifoni anogona zvakare kubata zviri nyore mafirimu kana mitambo. Kukanganisa kwepanji hakunzwiki, pane zvinopesana: Unogona kusiyanisa zviri nyore uye epakati toni kubva kune mumwe.
Kana kuyerwa kwenzeve kuri "kuchinja kwemutambo" kunotarisirwa nevashandisi kubva kumahedhifoni aya zvinoenderana zvakanyanya nemaitiro emushandisi uye mhando dzaimboshandiswa. Shanduko kubva kune yakachipa mahedhifoni kuenda kuNura's headband mahedhifoni kubva muumbozha chikamu chinokatyamadza. Chero ani anotova ane mahedhifoni anodhura anofanira kunyatsoteerera kuti aone kusiyana. Izvo chaizvo zviripo, asi kana izvi zvichikonzerwa nekuyera tekinoroji, iyo yakaenzana kana kungo sanganisa yekuvandudza munzeve uye pamusoro-nzeve, munhu wese anofanirwa kuedza kuzvitsvagira ega. Pakupedzisira, hazvizogoneki kujekesa izvi zvisina mubvunzo. Saka izvo zvakakosha kana zvasvika kune mahedhifoni ndeiyi: mubvunzo wekurira. Uye ndizvo chaizvo neNuraphone.
Nuraphone: kushanda kwebhatiri yepamusoro!
Mubvunzo wekuti kutonhora kwemahedhifoni kuburikidza neTesla mavharuvhu kunoshanda sezvainoita kana kuti izvi zvakakonzerwa nezvinhu zvesilicone cladding hazvigone kujekeswa zvizere - pamwe zvese zviri zviviri. Chero zvazvingava, iyo pfungwa yemugadziri Nura ndeyekuti maburi madiki ari padivi pe auricle akatumidza Tesla mavharuvhu anoyamwa mumhepo inotonhora nekudaro anotonhodza nzeve. Pasinei nemashiripiti ari shure kwayo: Iyo Nuraphone inovimbisa kutonhorera kunofadza pakuteerera mimhanzi, kuona mafirimu kana kutamba mitambo.
Uyu ndiwo "musanganiswa wemashiripiti" we-munzeve uye pamusoro-nzeve. Iyo silicone membrane mukati inotumira bass zvinooneka. Mufananidzo: André Volkmann
Chii chinocherechedzwa pamusoro pemahedhifoni nekuda kwedhizaini: Kunyangwe iyo inongoita ruzha kudzvinyirira inoshanda nemazvo uye inodzvinyirira ambient ruzha pamwero unofadza. Iine activated inokanzura ruzha kudzima, inonzi Active Noice Canceling (ANC), imwe inotonyanya kuvharwa kubva kunze kwenyika, kunyangwe isiri zvachose.
Iwo ma nuraphones anopawo hearthrough chimiro. Ambient noise inobva yapinda munzeve ichishandisa maikorofoni. Sezvakaita mamwe emhando dzepamusoro dzeANC modhi, iyo "Social Mode" inogona kuchinjika inowanikwa uye yobva yavhara nechikamu chekunze kweruzha: semuenzaniso, zviziviso mubhazi kana chitima - zvinoshanda, asi zvino zvakajairika. Chero zvazvingava, zvakanaka kuti Nura akafunga nezvebasa racho. Zvinogumbura: Pakati pezvinhu zvese, iyo neimwe nzira inogoneka inogovaniswa mabhatani haagone kushandiswa kudzora ANC, izvi zvinoshanda chete muzvirongwa zveapp.
Iko iyo Nuraphone inogona kuzvirumbidza ndeyekuita kwebhatiri. Mahedhifoni eBluetooth anofanirwa kumhanya kwemaawa anosvika makumi maviri aine bhatiri rakazara, asi isu hatina kunyatsosvika pakukosha kwepamusoro kunyangwe nekunyatsoshandisa "maficha: yakapera pamaawa gumi nemasere. Kuti bhatiri rinogara kwenguva yakareba sei zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana: inoshanda ANC, ambient tembiricha, asiwo vhoriyamu. Nezvekupedzisira, nuraphones dzakafanana. Kunyangwe kana ichikuvadza pakunzwa, vhoriyamu haigone kushandurwa kusvika kumazinga asingatsungiririki, asi izvi zvinogoneka ndizvo chaizvo zvinodiwa.
Pane zvishoma zvakabviswa panguva ino maererano nekureruka kwekushandisa. Iyo diki LED bar yaizoita kuti zvive nyore kuverenga iyo bhatiri level. Iwe unogona kunzwa kuti yakawanda sei bhatiri richiri nezwi rekombuta kana iwe unogona kusarudza kusarudza iyo app, asi iyo yekupedzisira inoshanda chete kana mahedhifoni asina kubatana netambo, sezvo Bluetooth isingagadzirise kubatana. Mhedzisiro: Kungotarisa chiyero chechaji neapp hachishande, unofanirwa kubatanidza muchidimbu mahedhifoni.
Kwete hurema hwenyama, asi hutsva hutsva: Iwo Tesla mavharuvhu anofanirwa kufambisa mahedhifoni. Iwe hauwane nzeve dzinodziya, asi mufungidziro iyo silicone inogona zvakare kuve nemutoro weizvi - kana ese ari maviri musanganiswa. Mufananidzo: André Volkmann
Kushanda kuburikidza nemabhatani maviri ekunzwa kuruboshwe uye kurudyi kweanotsvedza, zvisinei, anoshanda pasina matambudziko. Mabasa maviri aripo: tap uye kaviri tap. Basa racho rinogona kuitwa nyore nyore kuburikidza neapp. Nenzira iyi, makiyi ekuseta mabasa anogona kupihwa mabhatani, akadai sekuwedzera kana kuderedza vhoriyamu, activate kana kumisa kunyudza modhi, kana kutanga kana kumbomira mimhanzi. Saka wese mushandisi anogona kuisa izvo zvakakosha kwaari pamakiyi. Kwatiri isu, taivimba netatu ye smartphone, Nura mahedhifoni uye smartwatch kuti ishande - zvese zvinogona kudzorwa zviri nyore pasina kana kutora nharembozha muhomwe yako: Yakanakisa.
NaNura Microfone kune yemitambo headset
Mahedhifoni eNuraphone kusvika parizvino ave kushandiswa semahedhifoni emitambo ane zvimwe zvidzitiro. Kukurukurirana kwaikwanisika kuburikidza nemakrofoni akavakirwa-mukati, asi hapana chimwezve. Iyo mic mhando yaishandiswa, asi hapana chimwe. Nura anoita kunge akaziva izvi maererano neboka rinotarirwa revatambi. Mhedzisiro: maikorofoni yakamira-yega, inowanikwa zvakasiyana, inogona kubatirwa muchigadziko cheMheni, nekudaro ichiva nechokwadi chakanatsiridza kunaka kwezwi kubva zvino zvichienda mberi.
Muchokwadi, senge chaiyo yemitambo headset kunze kweNuraphone, iyo vatambi havachafanirwa kukanganisa pa "chaiyo yemitambo mahedhifoni". Mabhenefiti ehedhifoni chikamu anoramba asina kuchinjika, maikorofoni chinhu chakasarudzika chinokwana zvakakwana mune yekutanga dhizaini. Nura zvakare anovimba nemhando yepamusoro yekugadzirisa maikorofoni, iyo inodhura anenge makumi matanhatu euros. Iyo plug inovhara isina musono neyakagadzirirwa - uye isina imwechete - socket pazasi pekurudyi rwepamusoro nzeve. Iyo maikorofoni inozobatanidzwa muPC yekutamba, laptop kana imwe mudziyo wekupedzisira kuburikidza nejeki plug ine 60 mm yekupinda.
Iyo inosarudzika clip-pamaikorofoni inoshandura mahedhifoni eNuraphone kuita musoro wemitambo chaiwo. Mufananidzo: André Volkmann
Hungwaru hwakadii uhwu hunyengeri hunogona kutoonekwa kubva pakuti iwe hauchafanirwe kushandura kune mamwe mahedhifoni modhi kana iwe ukagara pasi paPC kana kunyaradza kutamba. Iyo Bluetooth yekubatanidza haishande paunenge uchishandisa Nura's wired gaming mic, asi panguva imwe chete iwe haufanirwe kuita pasina zvigadziriso zveprofile, nekuti izvi zvinotorwa neapp. Maikorofoni haifanirwe kuvanda kuseri kwemakwikwi: kutaura kunofambiswa zvakajeka, zvakajeka uye pasina kunonoka.
Kunyangwe kana Nura asina kutarisa kuboka revatambi kubva pakutanga, vagadziri vakakwanisa kuwedzera boka ravo rechinangwa nekuburitswa kwemakrofoni yekusarudzika yemitambo munguva pfupi yapfuura. Izvi zvichaita kuti mahedhifoni ave akanaka here kana kuti akanakisa emitambo mahedhifoni? Izvi zvichiri kuenderana zvakanyanya nekuravira kwemushandisi, nekuti ese masimba eNura mahedhifoni (ruzha, bass, kugadzirwa) asiwo kusasimba kwavo (huremu, kujaira kana kujaira) anochengetwa. Chokwadi ndechekuti: Nura zvakare anonwisa mapoinzi munzvimbo yekutamba nehupenyu hwayo hwakanaka hwebhatiri.
Munyika chaiyo, maikorofoni yemitambo inoratidza kuve yekutanga-kirasi yekuwedzera yeatove akanaka mahedhifoni. Muchokwadi, iyo modular system ine mukana wakakura mukuita, nekuti unogona kushandisa maikorofoni, asi haufanirwe kudaro. Kana iyo mic yakarembera pamukombe kwenzeve, iwe unogona zvakare kuigadzirisa neyakasanganiswa yekuchengetedza clip - inobatsira gimmick! Saka tambo refu inoratidza kuti inogumbura. Iyo yekubatanidza inoyera ingangoita mamita maviri, uye mushandisi wepakati angangovhara chikamu chayo chakanaka achishandisa loop uye tambo clip kuitira kuti munhu arege kuvhiringika.
Zvichakadaro, Nura akawedzera portfolio yayo yezvinhu zviripo uye zvikamu zvakasara zvakadaro. Kune maadapter akasiyana-siyana pamwe chete nenzeve kana kuti yakaoma kesi, iyo yakanyanya kusimba kupfuura yakavharwa nyoro, asi iyo yekupedzisira inozadzisa chinangwa chayo kupfuura zvakakwana. Chero zvazvingave, iyo yekutanga modhi haisisiri iyo yega yaunogona kudzokera pairi: Kana iyo pamusoro-nzeve vhezheni yakakurisa iwe, unogona kutenga inotakurika earplugs neNuraloop, iyo ingangove yakakodzerwa zvakanyanya nepamusoro- mafambiro mamiriro kupfuura Nuraloop "big Brother".
Iyo maikorofoni yemitambo inovhara zvisingaite nesocket uye inogara yakasimba mudzimba. Klipu yakavharirwa inopa imwe chengetedzo. Mufananidzo: André Volkmann
Izvo zvinokurumidza kuoneka mushure mekubatanidza maikorofoni ndiko kuchinja kwekushanda. Kana mahedhifoni eNuraphone akabatana kuburikidza neBluetooth, unogona kuwira kumashure pane anoshanda mabhatani mabhatani kuti utange mirairo yakambotsanangurwa. Iine maikorofoni yekutamba yakabatana, izvi hazvichagoneke nekuda kwekushaikwa kweBluetooth yekubatanidza. Uku hakusi iko kuperevedza, nekuti vatambi vanoshandiswa kudzora vhoriyamu kana mbeveve basa zvakananga kuburikidza neiyo inoshanda sisitimu kana kudzora kure kwakasungirirwa kune headset. Aya ndiwo mashandiro aanoita ne "Nuraphone Gaming Headset" combo. Unogona kuseta ruzha rwakanyanya kana kunyarara uchishandisa remote yakasungirirwa patambo.
Pakupedzisira, maikorofoni yemitambo iri kunyatsogutsikana maererano nemhando yezwi. Kutaura kunopfuudzwa kunonzwika sechisikigo uye kwakajeka. Iwe unogona kutaurira kubva kumakrofoni kuti yakagadziridzwa mumwe nemumwe kune mahedhifoni uye haisi chero sarudzo yeplug-on yekuwedzera.
Mhedziso pabvunzo yeNuraphone
Iyo Nuraphone inosanganisa zvinhu zviviri zvakakosha: innovation uye minimalism. Iyo yekupedzisira inogara ichiitwa. Kudzora zvinhu, mwenje, mavara akajeka kana gimmicks hazviwanikwe paNuraphone. Nura akasarudza dhizaini inogona kutsanangurwa seyakapusa uye inoyevedza. Kuvaka uye zvinhu zvakatonyanya kuvandudza uye uku ndiko kunowanikwa mahedhifoni emahara asina waya. Kumwe kukuvadza muchikamu chemutengo: Adapter ye-USB-C yaifanira kunge yasiiwa, unofanirwa kuitenga kwema euro makumi maviri ekuwedzera kana zvichidikanwa. Pamusoro pemahedhifoni pachawo, chiyero chekutakura chinosanganisira bhegi rakapfava rekufambisa, tambo yeanalogi, tambo yekuchaja uye maeplugs muhukuru hutatu.
Iko kusanganiswa kwesilicone nesimbi kunogutsa, kwakasimba uye nekudaro kunovimbisa kusimba, asi kunorema zvisingaite mumusoro pakutanga. Pfeka uye nekukasira kunzwa zvakanaka, handiwo mashandiro anoita mahedhifoni eNuraphone - zvinotora maawa mashoma kuti ujaire dhizaini isina kujairika uye yakaenzana isina kujairika yekupfeka kunyaradza. Nekudaro, kuramba uchipfuura kune mubairo, nekuti mahedhifoni eBluetooth anogogodza iwe kuburikidza nekristaro yakajeka ruzha uye kwete kungopuruzira chete, asiwo inooneka mabass akatenderedza uye munzeve dzako nekuda kwekugadzirwa kwawo.
Iyo pfungwa yekuyera kuyerwa kunosanganisira musanganiswa we-munzeve uye pamusoro-nzeve, kushandiswa kwemabhatani ekunzwa uye kubatanidza neapp inonzwika senge aloof space tekinoroji uye nerd gimmick. Mukupedzisira, zvakadaro, iwo nuraphones anongoburitsa ruzha rwakanaka - uye ndizvo zvinonyanya kukosha kana zvasvika kumahedhifoni. Vatambi vanobatsirwawo neizvi, nekuti ruzha rwemitambo yechiito kana mimhanzi yeorchestral yemitambo-yepamusoro-kirasi haisati yamboonekwa zvakadaro. Nekuda kweiyo kunyudza modhi, unogona kunyatsonzwa zviri kuitika pachiratidziro kana chimwe chinhu chanyatsoitika. Nekuti iyo Nuraphone ikozvino inogona zvakare kukwidziridzwa kune chaiyo yemitambo headset, imwe nzira iriko chaizvo uye kwete yekungofungira. Pamusoro pezvo, mitambo yemitambo ine ruzha runoshanda kudzima inopa nhanho nyowani yekutamba inonyudzwa.
Nura akaunza neyakajairwa pfungwa uye anopa mimhanzi, firimu uye emitambo mafeni imwe sarudzo kana zvasvika pakutsvaga yakakodzera mahedhifoni modhi muchikamu cheumbozha. Iyo Nuraphone headset haina kukwana zvakakwana, asi inopa padyo-yakakwana ruzha uye mamwe akangwara maficha. Chete "Social Mode" inoita kunge inoda kudzokororwa, vanhu vanowanzo bvisa mahedhifoni kuti vataure pane kumisa modhi.
Iyo Nuraphone headset yakakosha mutengo wekutenga here? Vashandisi vanofanira kupindura mubvunzo uyu pachavo. Pamari yavo, zvisinei, ivo pasina mubvunzo vanowana mahedhifoni eBluetooth ane maficha emhando yepamusoro, inotonhorera dhizaini uye inonzwika tekinoroji inoita zvakawanda kupfuura zvaungafunga kuti vangave. Kunyangwe kana mahedhifoni atove anotyisa: Zvichave zvinonakidza kuona rudzi rwemhando yetekinoroji inounzwa naNura kumusika mune ramangwana.
Nura Nuraphone pamusoro peNzeve Noise Cancellin * 325,03 EUR tenga
pfupiso Mahedhifoni eNuraphone anotora kujaira, asi obva agutsikana neruzha rwavo runotyisa. Iwe unocherechedza zvitsva, asi kwete zvose. Iyo in-nzeve / on-ear combo, iyo inovimbisa yakanaka ruzha mufananidzo, inonyanya kufadza.
Kare Robin Hood: Mutambo mutsva webhodhi waMichael Menzel uchaburitswa muna 2021
Inotevera Capcom inovandudza Ghosts 'n Goblins kuchengetedza chiratidzo
E-Mitambo: Yekutanga NBA 2K Vatambi Mutambo weNyika ine shasha yayo
Isu pachedu: Vanyori venhau vanodiwa pamitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo